OTU ESI MEPEE MGBASA ODS - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Isi Ụdị faịlụ
Mepee usoro ODS
Ihe ndekọ na ndọtị ODS bụ ederede free. N'oge na-adịbeghị anya, ha na-enwewanye asọmpi na ụdị Excel ụdị - XLS na XLSX. A na-echekwa tebụl ndị ọzọ dị ka faịlụ na ndọtị a kapịrị ọnụ. Ya mere, ajụjụ na-aghọ ihe dị mkpa, ihe na otu esi emepe usoro ODS.
Hụkwa: Ana-akpọ Microsoft Excel
Ụdị ODS bụ usoro mbipụta nke usoro OpenDocument, nke e mere na 2006 ma ọ bụghị akwụkwọ Excel nke na-enweghị onye ruru eru na-ahụ n'oge ahụ. Nke mbụ, ndị na-emepe emepe free software ghọrọ ndị nwere mmasị na usoro a, maka ngwa nke ọtụtụ n'ime ha ka ọ ghọrọ isi. Ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-edozi table na otu ụzọ ma ọ bụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na faịlụ site na Mgbasa ODS.
Tụlee nhọrọ maka ịmeghe akwụkwọ na ndọtị a kapịrị ọnụ iji ọtụtụ ngwanrọ.
Usoro 1: OpenOffice
Malite nkọwa nke nhọrọ maka ịmepe usoro ODS na Apache OpenOffice office suite. Maka ihe nhazi usoro Calc, ntọala a kapịrị ọnụ bụ isi mgbe ị na-echekwa faịlụ, ya bụ, isi maka ngwa a.
Download Apape OpenOffice maka n'efu
Mgbe ị wụnye OpenOffice ngwugwu, ọ na-edebanye na ntọala usoro niile faịlụ na ndọtị ODS ga-emeghe site na ndabara na usoro Calc nke ngwugwu a. Ya mere, ọ bụrụ na ịmeghị aka ịgbanwe ntọala aha ya site na nchịkwa nchịkwa, iji malite akwụkwọ nke ndọtị a kapịrị ọnụ na OpenOffice, ọ ga-ezuru ndekọ nke nhazi ya site na iji Windows Explorer ma pịa aha faịlụ ahụ na igodo abụọ nke bọtịnụ òké aka ekpe.
Mgbe ịmechara usoro ndị a, tebụl nke Mgbatị ODS ga-amalite site na interface ngwa Calc.
Ma, e nwere nhọrọ ndị ọzọ iji na-agba tebụl ODS na OpenOffice.
Gbaa ngwugwu OpenOffice Apache. Ozugbo windo mmalite na nhọrọ nke ngwa a gosipụtara, anyị na-eme ka pịa pịa pịa Ctrl + O.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike pịa bọtịnụ ahụ. "Meghee" na mpaghara etiti nke windo mmalite.
Nhọrọ ọzọ bụ pịa bọtịnụ ahụ. "Njikwa" na mmalite window menu. Mgbe nke ahụ gasịrị, site na ndepụta ndọpụta, họrọ ọnọdụ "Meghee ...".
Ihe ọ bụla a na-egosi na-eme ka windo ọkọlọtọ mepee faịlụ a ga-ebido, ọ ga-aga na ndekọ ebe a ga-emeghe tebụl. Mgbe nke ahụ gasịrị, mepee aha akwụkwọ ahụ wee pịa "Meghee". Nke a ga-emeghe tebụl na Calc.
Ịnwekwara ike ịmepụta tebụl ODS ozugbo site na nchịkọta Calc.
Mgbe ịchọrọ Kalk, gaa na mpaghara nke nhọrọ a kpọrọ "Njikwa". Ndepụta nhọrọ ga-emepe. Họrọ aha "Meghee ...".
N'aka ozo, ị nwekwara ike itinye nchikota ama ama. Ctrl + O ma ọ bụ pịa akara ngosi ahụ "Meghee ..." dị ka folda na-emeghe na toolbar.
Nke a na - eduga n'eziokwu ahụ na windo maka ịmepe faịlụ ndị ahụ, nke anyị kọwara obere oge, ka arụ ọrụ. N'otu ụzọ ahụ, ị ​​ga-ahọrọ akwụkwọ ahụ ma pịa bọtịnụ ahụ. "Meghee". Mgbe nke ahụ, tebụl ahụ ga-emeghe.
Usoro 2: LibreOffice
Nhọrọ ọzọ maka ịmepe tebụl ODS bụ iji ụlọ ọrụ LibreOffice. O nwekwara ihe nhazi nchekwa nke nwere otu aha dị ka OpenOffice - Kalk. Maka ngwa a, usoro ODS bụ isi. Nke ahụ bụ, usoro ihe omume ahụ nwere ike ime ihe niile na tebụl nke ụdị ahụ akọwapụtara, malite na mmalite ma mechie na edetu na ichekwa.
Mwepụta FreeOffice ngwugwu. Mbụ, ka anyị lelee otu esi mepee faịlụ na windo mmalite ya. Ị nwere ike iji kọntaktị zuru ụwa ọnụ iji malite windo oghere. Ctrl + O ma ọ bụ pịa bọtịnụ "Mepee Njikwa" na aka ekpe.
O nwekwara ike inweta kpọmkwem otu ihe ahụ site n'ịpị aha ahụ. "Njikwa" na top menu, ma na-ahọpụta site na listi ndepụta "Meghee ...".
A ga-emepe windo oghere. Gaa na ndekọ ebe ebe table ODS dị, họrọ aha ya ma pịa bọtịnụ "Meghee" na ala nke interface.
Ọzọ, tebụl ODS ahọrọ a ga-emeghe na Calre ngwa nke LibreOffice ngwugwu.
Dị ka ọ dị banyere Office Open, ị nwekwara ike mepee akwụkwọ achọrọ na LibreOffice ozugbo site na ọnụọgụ Calc.
Gbaa windo nke usoro tablec Calc. Ọzọkwa, imeghe windo oghere, ị nwekwara ike ịmepụta ọtụtụ nhọrọ. Mbụ, ị nwere ike itinye akwụkwọ akụkọ a na-akpọkọta. Ctrl + O. Nke abuo, ị nwere ike pịa akara ngosi ahụ "Meghee" na toolbar.
Nke atọ, ị nwere ike ịgafe ihe ahụ "Njikwa" ihe ntanetị na ndepụta na-emepe họrọ nhọrọ "Meghee ...".
Mgbe ị na-arụ ọrụ ọ bụla a kapịrị ọnụ, window nke mepee akwụkwọ nke anyị maara nke ọma ga-emeghe. Ọ na-arụ kpọmkwem otu aka ahụ a rụrụ mgbe ọ na-emeghe tebụl site na Ogwepụta Office amalite window. Tebụl ga-emeghe na ngwa Calc.
Usoro 3: Excel
Ugbu a, anyị ga-elekwasị anya n'otú e si emeghe tebụl ODS, ma eleghị anya na ihe kachasị ewu ewu nke mmemme - Microsoft Excel. Eziokwu ahụ bụ na akụkọ banyere usoro a bụ ihe kachasị adị ugbu a n'ihi eziokwu bụ na, n'agbanyeghị eziokwu na Excel nwere ike imeghe ma chekwaa faịlụ nke usoro a kapịrị ọnụ, ọ naghị arụ ọrụ mgbe niile. Otú ọ dị, n'ime ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ikpe, ma ọ bụrụ na nkwụsị dị ugbu a, ha bụ ndị na-abaghị uru.
Ya mere, anyị na-agba ọsọ Excel. Ụzọ kachasị mfe bụ ịga window window na-emeghe site na ịpị kọntaktị zuru ụwa ọnụ. Ctrl + O na keyboard, ma e nwere ụzọ ọzọ. Na window Excel, gaa na taabụ "Njikwa" (Na Excel 2007, pịa na Microsoft Office logo na aka ekpe aka ekpe nke interface ngwa).
Gaa na ihe "Meghee" na aka ekpe.
A na-emepe windo mmalite, yiri nke anyị hụrụ na ngwa ndị ọzọ. Gaa na ya na ndekọ ebe ebe nchekwa ODS dị, họrọ ya ma pịa bọtịnụ ahụ "Meghee".
Mgbe ịmechara usoro ahụ a kapịrị ọnụ, tebụl ODS ga-emeghe na window Excel.
Mana ekwesiri ikwu na nsụgharị Excel 2007 nke mbụ anaghị akwado ọrụ na usoro ODS. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha pụtara n'ihu karịa usoro a. Iji mepee akwụkwọ na ndọtị a kapịrị ọnụ na nsụgharị Excel ndị a, ịkwesịrị ịwụnye ngwa mgbakwunye pụrụ iche bụ Sun ODF.
Wụnye Sun ODF ngwa
Mgbe ị wụnye ya, bọtịnụ ga-apụta na toolbar. "Bubata faịlụ ODF". Site n'enyemaka ya, ị nwere ike mbubata faịlụ nke usoro a gaa na nsụgharị nke Excel.
Ihe omumu: Otu esi emepe faịlụ ODS na Excel
Anyị gwara gị otu esi emeghe akwụkwọ ODS na ndị na-ewu ewu na tebụl kachasị ewu ewu. N'ezie, nke a abụghị ndepụta zuru ezu, ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile nke oge a na-akwado ọrụ ahụ na mgbatị a. Ka o sina dị, anyị kwụsịrị na ndepụta nke ngwa, otu nke arụnyere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla Windows ọrụ na 100% ihe gbasara nke a.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ụdị faịlụ 2019